Chikumi 7, 2018 arun
Fidelity anogona vomurova crypto Exchange
Fidelity Investments, zvakasimba kuti rinotarisira $2.5 tiririyoni mu vakakwanisa midziyo, anorongera ari buildout mishonga zvaizoitika kusundira kumusika kuti Bitcoin inotevera padanho.
Mukuwedzera, Fidelity ari vakabhadhara kuvaka digital twa Exchange, maererano imwe zvemukati basa AD. The zvakasimba ari kutsvaga DevOps hurongwa injiniya “kubatsira injiniya, sika, uye dhipuroya munhu Digital Chakanaka exchange zvese paruzhinji uye pasiri gore.”
The zvakasimba riri kushanda muchitokisi negadziriso crypto, maererano rimwe basa AD.
Kana Fidelity akabudirira anotangazve zvigadzirwa izvi, zvingava kumiririra imwe zvikuru inofamba pedyo Wall Street akasimba kupinda musika digitaalinen zvinhu.
It kusvetuka, Fidelity kuti CEO, Abigail Johnson, ari mutsigiri Bitcoin.
Kana Fidelity anoita nokuparura imwe crypto Exchange chipiriso, Zvaizova arguably kuva pakati guru inofamba nenzira huru Wall Street akasimba kupinda nascent crypto musika, inomira panguva inenge $350 bhiriyoni.
Thailand miedzo Central Bank cryptocurrency
Bank of Thailand kuti gavhuna Veerathai Santiprabhob yakaratidza muhurukuro ichangopfuura kuti pakuva Wholesale Central Bank digitaalinen mari pari ari Mapaipi sorutivi rakasiyana kuitwa munyika muna trialing blockchain michina iri sectors siyana.
The purojekiti, ainzi Inthanon, kugoverana zita chirefu kupfuura gomo Thailand raMwari, anotsvaka kusika kubhengi pachake blockchain yakavakirwa cryptocurrency kuti interbank kwema vose anomhanya uye isingadhuri.
Akati ari kutaura:
“Kuedza izvi zvinofanira pave nokukurumidza uye isingadhuri kutengeserana uye chivimbo chakasimba nokuda zvishoma intermediation vaida zvichienzaniswa magetsi nehurongwa.”
Northern Trust Files bvumidzwa kuchengeta maminitsi musangano iri blockchain
Financial Services yakasimba Northern Trust akava bvumidzwa kuti kutsigira vakakwira zvinyorwa misangano vachishandisa blockchain Tech.
Nzira utilizes dungwerungwe akangwara zvibvumirano kunombata umboo chokuita kumusangano, kusanganisira zvinyorwa ari kupinda (sourced kubva namano yavangasangana kutakura), kana musangano vakatora nzvimbo uye apo.
Northern Trust hones pane zvikuru chaizvo kushandisa nyaya, chiitiko Data, uye anotaura kuti akasimba wacho vakwanise zvinoitwa achiunganidza operative Data kubudikidza vakagovera maitiro.
Coinbase anoita mberi kuti vave yaidzorwa kuchengetedzeka yakasimba
Cryptocurrency Exchange Coinbase akazivisa Wednesday kuti akanga achiita kufambira mberi akananga chinangwa chayo kushanda ari federally yaidzorwa bhuroka-munyengeri.
Chief uchishandisa mukuru uye mutungamiriri Asiff Hirji akanyora kambani Blog mumhanyi kuti akasimba ari mubishi kuti tive bhuroka-Dealer rezinesi. The kambani kuda kutsvaka kufarirwa kubva U.S. Kuchengetedzeka uye Exchange Commission (SEC) uye Financial Industry pamutemo Authority (FINRA) kupa blockchain anotsanangura kuchengetedzeka.
Kraken Daily Market Mushumo 06.06.2018
$118M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Chikumi 29, 2018 pa 10:23 AM